Xiaomi သည် privacy နှင့် ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲချက်များကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည် Androidsis
Xiaomi သည် privacy နှင့် ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲချက်များကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်
နောက်တဖန်သူတို့ရှေ့မှောက်သို့ရောက်ကြ၏ နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်း။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်၏အလှည့်ဖြစ်ခဲ့သည် Xiaomi က။ ထပ်ပြီး သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ဒေတာများနှင့်အတူသံသယတရားဝင်မှုကျင့်သုံးစွပ်စွဲခံရသူ။ ထို့အပြင်သူသည်များစွာသောတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်များတွင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်။
ထံမှစွပ်စွဲချက် နာမည်ကျော် Forbes မဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ Xiaomi စမတ်ဖုန်းများသည်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည်ဟုဆိုသည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများသည်။ ထိုနောက်မှ ၎င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင် server များသို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအလိုအလျောက်ပို့ဆောင်သည် ရုရှားနှင့်စင်္ကာပူတွင်တည်ရှိသည်။
1 Xiaomi ကမူကာကွယ်ထားသောအသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုမသုံးဟုဆိုသည်
Forbes မဂ္ဂဇင်းမှ၎င်း၏ဆောင်းပါးတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် ဘယ်လိုတရားမဝင်အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပျက်မယ်လို့အဘယျသို့ applications များ အသုံးပြုသူများထံမှကာကွယ်ထားသောအချက်အလက်များကို၎င်း၏ဆာဗာများသို့လွှဲပြောင်းခြင်း။ Pro နှင့် Mint browser များအသုံးပြုသူများ၏အသိပညာသို့မဟုတ်သဘောတူညီမှုမပါဘဲ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးကုသပေးမည့်သူများဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ Google, Apple နှင့် Facebook ကအခြားသူများစွာအနက်မှ၎င်းတို့သည်ယခင်ကသူတို့၏သုံးစွဲသူများထံမှသီးသန့်အချက်အလက်များကိုကောက်ယူသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။ သူတို့ကိုထံမှ express ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ။ သူတို့ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းအပြင်လုပ်ဖို့ စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ခေါင်းပုံဖြတ်သည်.
Xiaomi သည်ထိုစွပ်စွဲချက်များကိုသေချာစေရန်ဖြင့်သူ့ကိုယ်သူခုခံကာကွယ်ခဲ့သည် ဒေတာစုဆောင်းမှုကိုဒေတာအားလုံးအမည်မသိသော encryption ကိုလုပ်ငန်းစဉ်အောက်မှာလုပ်ဆောင်သည်။ သူကဲ့သို့တူညီသောသွေးပြန်ကြောများတွင်စောဒကတက်သည် privacy မူဝါဒများ သူတို့ဘာလုပ်နေတာလဲ? နိုင်ငံတကာမှအတည်ပြုခဲ့သည် ၎င်းတို့သည်မည်သည့်နယ်မြေ၏လက်ရှိဥပဒေနှင့်မဆန့်ကျင်ပါ။
လက်ရှိဘရောင်ဇာအများစုမှာကဲ့သို့ Xiaomi သည် Mint ရှာဖွေရေးယန္တရားတွင် incognito mode ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့ကဤ mode နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုသက်ဝင်ကြောင်းသေချာ အဘယ်သူမျှမစုစုပေါင်းဒေတာစုဆောင်းပါလိမ့်မည်.
Xiaomi မှကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်သည်အသုံးပြုသူအားခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောအချက်အလက်များမပါရှိသော်လည်းကုမ္ပဏီအများစုကပြုလုပ်သော ထိုကဲ့သို့သောဒေတာစုဆောင်းမှု၏မျှသာအခိုင်အမာပြီးသားအများအပြားပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မယုံကြည်မှုစေသည်။ သင်၏အရသာများ၊ ရှာဖွေမှုများသို့မဟုတ်သင်လည်ပတ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမသိစေချင်ပါကအင်တာနက်ကိုမသုံးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi သည် privacy နှင့် ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲချက်များကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်
မှတ်ချက် ၁၀ နှင့်မှတ် ၁၀+ အတွက်လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုယခုရရှိနိုင်
Clyma Weather သည်ပံ့ပိုးသူ (၃) ဦး ထံမှအချက်အလက်များကိုပေါင်းစပ်ပေးသောရိုးရှင်းသည့်ရာသီဥတုအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်